कोरोना भाइरससंग लड्दै काम गर्नु जोखिम हो, तर हामी चुप लागेर बसेका छैनौं - Rahashya Khabar Online News Portal Rahashya Khabar Online News Portal
प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख ७, आईतवार १५:०५
नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको उत्कृष्ठ नमूनाको रुपमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडको स्थापनाको उद्देश्य, यसले देश र जनताप्रति निर्वाह गरिरहेको भूमिका, कालाबजारियाहरुबाट बेला–बेला हुने गरेका मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गरिएका प्रयास, भूकम्प, नाकाबन्दी, प्राकृतिक प्रकोपका बेला नेपाली जनतालाई खाद्यान्न लगायत चिनी, ग्यास समेत सहज बनाउँदै आएको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले यो विशम परिस्थितिमा अहिले के गरिरहेको छ ?
विश्वभरी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाल पनि अछुतो अब रहेन । केही संकेतहरु देखिएका छन् । वैशाख १५ गतेसम्मका लागि सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको अवस्था विद्यमान छ । लक डाउनका कारण सरकारको अनुमति विना घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन र हुँदैन पनि ।
यस्तो अवस्थामा सरकारको पनि लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले कस्तो सेवा दिइरहेको छ ?
नुन, चिनी र ग्यास लगायत खाद्यान्न कसरी विक्री वितरण भईरहेको छ । कहाँ कहाँ सहुलियत पसल खोली सेवा दिईरहेको छ रु ग्यास चिनीको अभाव बजारमा देखिएको छ । यसलाई कसरी हेरिरहेको छ । यी र यस्तै विषयमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा विभागिय प्रबन्धक ब्रजेश कुमारझासंग आर्थिक बजार न्यूज डटकमका सम्पादक भूपेन्द्र आचार्यले गरेको कुराकानीः
यो विषम परिस्थितिमा राज्यको समेत लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले कस्तो सेवा दिएको अवस्ता छ ?
हामीले सदाझै सेवा दिएका छौं । यो विशम र अप्ठ्यारो अवस्थामा अलिक बढि सचेत र सजकता अपनाएर काम गरेका छौं । यो बेला जनतालाई ग्यास, नुन, अन्य खाद्यान्नका सामाग्री पु¥याउनु पहिलो कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने भावनाका साथ हामीले सेवा पक्कै दिएका छौं । हामी २४ सै घण्टा सेवा दिइरहेका छौं । नुनको लागि हाम्रो जिम्मेवारी छौं । त्यो पूरा गरेका छौं । १० महिनाको लागि आयोडिनयुक्त नुन पर्याप्त छ । १ लाख ६५ हजार मेट्रिक्टन नुन छ ।
नुन, ग्यास, चिनी लगायतका खाद्यान्न र आवश्यक बस्तुको चर्को अभाव देखिन्छ । कति स्टक छ त ?
नुन प्रसस्त छ । चिनी र ग्यास पनि छ । चिनीको कुरा गर्दा गत वर्ष देखि चिनी आयातमा हामीलाई रोक लगाएका थियौं । सरकारले तर, यो अवधिमा १० हजार मेट्रिक्टन ल्याउन फेरि सरकारले हामीलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ र हामीले ल्याएको अवस्था छ । २ हजार मेट्रिक्टन बिक्री ग¥यौ । ८ हजार मेट्रिक्टन चिनी अझै छ ।
अर्को कुरा स्वदेशी उद्योगहरुसंग पनि चिनी पर्याप्त होला । अहिलेलाई अभाव छैन । तर, २÷३ महिनापछि चाडवार्ड आउने भएकाले तयारी अहिलेबाटै थालिनु पर्दछ । ग्यासको कुरा उठाउनु भयो । ग्यास हाम्रो एसटिसी हो । यसको बजार २ प्रतिशत मात्रै छ । बजारमा हामीले दिएकै छौं । आधा सिलिण्डर बिक्री भएपछि कम बिक्री भएको छ । अब फेरि फूल सिलिण्डरको तयारीमा छौं । धेरै परिवारले राजधानी छाडेकाले ३५प्रतिशतले बिक्री घटेको छ । अभाव चाही हुने छैन । हामी सचेत छौं ।
बजारमा अहिले यो विशम परिस्थितिमा खाद्यान्न सामान कालाबजारी भएको कुरा छ । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले चाहि कति ध्यान दिएको ?
राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । मैले भनिसके हामी २४ सै घण्टा जनतालाई सेवा दिन लागि परेका छौं अफिस र घरबाट पनि टेलिफोनको माध्यामबाट सामान पु¥याउने काम हामीले गरेको अवस्था छ । तपाईलाई थाहा छ । हिजो २०४६ सालको आन्दोलन, ०६२÷०६३ को जन आन्दोलन मधेशका विभिन्न आन्दोलन, भारतको अघोषित नाकाबन्दी र भूकम्पका बेला हामीले पु¥याएको योगदान सबैलाई थाहा नै छ ।
यो चाहि फरक बेला पक्कै हो । अदृश्य शक्तिबाट आएको कोरोना भाईरससंग लड्दै सेवा दिनु जोखिम मोल्नु नै हो । तर, दुःख र पीडाको बेला हामी चुप लागेर बसेका छैंनौ । इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण ढुक्क भए हुन्छ । नुन हामीसंग प्रसस्त छ ।
यो अत्यन्तै विशम र असहज अवस्थामा राजधानी बाहिर चाही साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले कस्तो सेवा दिएको छ त ?
हामी सेवा दिनै बसेका मान्छे सदा झै सेवा दिएका छौं । हाम्रा सबै राजधानी बाहिरका अफिस खुल्ला छन् । स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर खाद्यान्न सामाग्री गाउँगाउँ पु¥याएका छौं । धनगढी नगरपालिकासंग सहकार्य गरेर त्यहाँ गाउँ गाउँमा सामान पुर्याउका छौं । नियमित बाहेक २÷३ वटा गाडी थपी काम गरेको अवस्था चाही छ । यदि कतैबाट हामीलाई खबर गरिए हामीले तत्कालै चिनी, चामल, ग्यास, दाल, नुन पठाउन तयार छौं । कुनै प्रकारको अभाव हुन हामी दिँदैनौ ढुक्क भए हुन्छ ।
अहिले कोरोना भाईरसबाट विश्व नै रोहिरहेको अवस्था छ । यसबाट अब नेपाल पनि अछुतो रहेन यस्तो बेला सबै कार्यलय खुलाएर सेवा दिएको बताउनु भयो । कर्मचरी साथीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा चाहि कसरी मिलाउनु भएको छ त ?
भूपेन्द्रजी बडो राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो । अहिले मान्छे देखि मान्छे डराउनु पर्ने बेला आयो तर पनि हामीले जीवननै जोखिममा राखेर २४ सै घण्टा सबै उपत्यका र वाहिरका कार्यालय खोली सेवा दिएका छौं ।
अर्को पक्ष हाम्रा कर्मचारीहरुको सुरक्षाका कुरा उठाउनु भयो । रोगथामका सबै उपाय हामीले अपनाएका छौं । गाडीमा सेनिट्राइजिङ गरेका छौं । माक्स, पञ्जा, सेनिट्राइजर प्रयोग गरेका छौं । भिडभाड हुन दिएका छैनौ । सोसल डिस्टेन्स अपनाएका छौं । अफिसमा कम साथीहरुबाटै काम गराएका छौं ।
२ सिफ्ट गरि काम गरेका छौं । विहान र दिउँसो गरि कर्मचारीहरुले काम गर्नु भएको छ । बीचमा मेन टिम बसेर छलफल गरिरहेका छौ नि ।
नेपाल सरकारको पनि स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले राज्यद्वारा कोरोना बिरुद्ध लड्न स्थापना गरेको राष्ट्रिय कोषमा कस्तो सहयोग गर्नु भएको छ त ?
यति पैसा नै भनेर निर्णय चाहि भएको छैन । बिगतमा हामीले विपत र अप्ठ्यारोमा राज्यलाई सहयोग गरेको इतिहास छ । हामी लेगर्ने नै हो । अहिले चाही नाफा नै नखाएर कम मुल्यमा खाद्यान्न सामान बिक्री गरेका छौं । यो पनि राहत हो ।
हामीले चिनी ७८ मा बेच्नु पर्नेमा ७३ मै बेचिरहेका छौं । यो जनतालाई राहत नै हो । अरु दाल, चामल, नुन पनि नाफा नखाई दिएका छौं ।
बजारमा सामान नपाएको गुनासो पनि छ नि ?
हामीसंग यस्ता गुनासो आएको छैन । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले बेच्ने नुन, चिनी, दाल, चामल, ग्यास प्रसस्तै छ । हामीसंग माग गरे जति दिन तयार छौं । अर्को कुरा सम्बन्धीत कार्यलय मार्फत डिलर र सब डिलरले सामान मागे हामी तत्कालै उपलब्ध गराउन तयार छौं ।
०सहुलियत पसल पनि सञ्चालन गर्नु भएको होला नि?
छन् नि किन नहुने, सतुङ्गल, कालीमाटी, जडिबुटि, भक्तपुर थरी ४ ठाउँमा सहुलियत पसल हाम्रा सञ्चालनमा छन् ।
यो विशम र अप्ठ्यारो बेला विशेष सेवा दिएको बताउनु भयो अन्यमा केही छ ?
साच्चै भन्नुपर्दा हामीले पृथक तरिकाले सेवा यो विशम र अप्ठ्यारो बेला दिएका छौं । अहिले सुरक्षाको च्यालेन्ज पक्कै छ । गाडी चलेका छैनन् । रोगबाट बच्नु पर्ने दायित्व थपिएको छ । पहिला जस्तो सहज छैन । तर, पनि कुनै कम्प्रमाईज गरेका छैनौ । अर्को कुरा राज्य र विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका निर्देशन पूर्ण पालना गरौं । सोसल डिस्टेन्स अपनाउ स्वास्थ्य रहौं, सुरक्षीत रहौं ।
-आर्थिक बजार न्यूज डटकमबाट साभार